Fumana iingenelo zekharityhulam yelizwe elichongiweyo
Izikolo zehlabathi jikelele ze-Baccalaureate (IB) zizinikezele kwimfundo esebenzayo, kunye nokuvumela abafumana i-diploma ze-IB ezikolweni eziphezulu ukuba bafunde kwiiyunivesithi emhlabeni jikelele. Injongo yemfundo ye-IB kukudala abantu abadala abanomdla, abanentlalontle abasebenzisa imfundo yabo yenkcubeko ukukhuthaza uxolo lwehlabathi. Izikolo ze-IB ziye zanda kakhulu kwiiminyaka yamuva, kwaye kukho iinkqubo ezininzi ze-IB kwizikolo zikarhulumente kunye nezizimeleyo kunanini ngaphambili.
I-diploma ye-IB yasungulwa ngabafundisi kwiSikolo samazwe ngamazwe saseGeneva. Aba titshala badala inkqubo yemfundo yabafundi abafudukela kumazwe ngamazwe kwaye bafuna ukuya eyunivesithi. Inkqubo yokuqala yayijoliswe ekuphuhliseni inkqubo yokufundisa ukulungiselela abafundi kwiikholeji okanye kwiyunivesiti kunye neesethi zeemviwo aba bafundi bafuna ukuya kuzo kwiiyunivesithi. Uninzi lwezikolo zakuqala ze-IB zaziyimfihlo, kodwa ngoku isiqingatha sezikolo ze-IB zikarhulumente. Evela kule nkqubo yokuqala, i-International Baccalaureate Organisation yaseJeneva, eSwitzerland, eyasungulwa ngo-1968, ilawula abafundi abangama-900 000 kumazwe angama-140. I-United States inezikolo ezingaphezu kwe-1,800 zeZikolo zehlabathi ze-IB.
Isitatimende somsebenzi we-IB sifunda kanje: "I-Baccalaureate yamazwe ngamazwe ijolise ukuphuhlisa abantu abatsha abanolwazi, abanolwazi nabanononophelo abancedayo ekwakheni ihlabathi elincinci elinoxolo kunye nokuqonda kwenkcubeko kunye nentlonipho."
Inkqubo yeprayimari yonyaka , kubantwana abaneminyaka engama-3 ukuya ku-12, inceda abantwana bahlakulele iindlela zokwenza uphando ukuze bakwazi ukubuza imibuzo baze bacinge ngengqiqo.
Inkqubo yeminyaka ephakathi , ukususela kwiminyaka eyi-12 ukuya kwe-16, inceda abantwana badibanise phakathi kwabo kunye nehlabathi elikhulu.
Uhlelo lwediploma (funda ngaphezulu ngaphantsi) kubafundi abaneminyaka eli-16-19 ukuya kulungiselela abafundi kwizifundo zaseyunivesithi kunye nobomi obunentsingiselo ngaphezu kweyunivesiti.
Inkqubo ehlobene nomsebenzi isebenza imigaqo ye-IB kubafundi abanqwenela ukuqhuba izifundo ezihlobene nomsebenzi.
Izikolo ze-IB ziyabonwa ukuba zininzi kangakanani umsebenzi eklasini ezivela kwiminqweno nemibuzo yabafundi. Ngokungafaniyo kwigumbi lokufundela emveli, apho ootitshala baqulunqa izifundo, abantwana kwi-IB kwiklasi yokuncedisa baqondisa ukufunda kwabo ngokubuza imibuzo enokuphinda iqhube isifundo. Nangona abafundi bengenakho ukulawula ngokupheleleyo kwigumbi lokufundela, bancedisa ukuba bathathe inxaxheba kwingxoxo kunye nootitshala babo apho izifundo ziphuhliswa khona. Ukongezelela, ii-classroom ze-IB zihlala zikhutshelwa izilwanyana zendalo, oko kuthetha ukuba izifundo zifundiswa kwiindawo ezahlukeneyo. Abafundi bangafunda malunga needinosaurs kwisayensi kwaye bawadwebe kwiklasi yobugcisa, umzekelo. Ukongezelela, icandelo lezithethe zenkcubeko ye-IB kuthetha ukuba abafundi bafunda ezinye iinkcubeko kunye nolwimi lwesibini okanye nolwesithathu, bahlala besebenza kwinqanaba lokutshintsha kolwimi lwesibini. Izifundo ezininzi zifundiswa ngolwimi lwesibini, njengoko ukufundisa ngolwimi lwangaphandle kufuna ukuba abafundi bangayi kufunda kuphela olo lwimi kodwa bahlale beshintsha indlela abacinga ngayo ngolu hlobo.
Iimfuno zokufumana i-diploma ye-IB zizinzile.
Abafundi mabaqulunqe isicatshulwa esongezelelweyo malunga namazwi angama-4 000 adinga uxanduva olufanelekileyo lophando, ngokusebenzisa izakhono eziphambili zokucinga kunye neengxelo ezixhomekeke kwiprogram. Le nkqubo igxininisa ubuchule, isenzo kunye nenkonzo, kwaye abafundi mabazalise iimfuno kuzo zonke iindawo, kubandakanywa nenkonzo yoluntu. Abafundi bakhuthazwa ukuba bacinge ngokucacileyo malunga nendlela abazuza ngayo ulwazi nokuvavanya umgangatho wolwazi abafumanayo.
Izikolo ezininzi zigcwele i-IB, nto leyo ithetha ukuba bonke abafundi bathatha inxaxheba kwinkqubo yokufunda ngokukhawuleza, ngelixa ezinye izikolo zinika abafundi ithuba lokubhalisa njengomviwa opheleleyo we-diploma ye-IB okanye, banokwenza nje ukhetho lwezifundo ze-IB kunye nekharityhulam ye-IB ngokupheleleyo. Ukuthatha inxaxheba ngokukodwa kwinkqubo kubanika abafundi intsingiselo yeprogram ye-IB kodwa ababenako ukufaneleka kwi-diploma ye-IB.
Kwiminyaka yakutshanje, iinkqubo ze-IB zikhule eMelika. Abafundi nabazali bathandwa kwiimeko ezizizwe ngezizwe kunye nokulungiselela kwabo abafundi ukuba babekho kwihlabathi jikelele. Ukwandisa, abafundi bafanele babe nemfundo apho ukuqonda kwezenkcubeko kunye nezakhono zolwimi zixabiswa kwaye ziphuculwe. Ukongezelela, iingcali zikhankanyile umgangatho ophezulu weenkqubo ze-IB, kwaye iiprogram zidunyiswa ngokulawula kobulunga kunye nokuzibophelela kwabafundi kunye nootitshala.
Iminikelo Yesikolo Ebucala
Izibambiso zesiTenzi zesiTali: Ininzi
Iimpawu ngegrama: Ku-"A" ukuya ku "I" kunye ne "An" kunye "Abanye" Phakathi